मन परेकी केटी भाउजु भएपछि ……. ~ The unique Blog
मन परेकी केटी भाउजु भएपछि …….
Sushil Poudel 9:21 PM entertainment, jptnepal, love story, man pareko kt vauju, nepali love story No comments
एक दुई गर्दा गर्दै जिन्दगीको ३० औ बसन्त पार गरिसके मैले । यद्यपी बसन्त त मेरो जीवनमा बाल्यकाल बाहेक कहाँ आयो र ! सदैव हिउँ परिर¥यो, सिरेटो चलिरहर्याे मेरो जीवनमा अनि रुखो रहिरहे म, एउटा पतझर रुखजस्तै । मेरो यस्तो भावना सुनेर कतिलाई दिक्क लाग्ला कतिलाई वाक्क । मैले गरेका जीवनका अनुभूतिहरु तपाईले महशुस गर्न पनि सक्नुहोला या नहोला । तापनि म आज सबैलाई सुनाउँदै छु मेरो ठगिएको जिन्दगीको आत्मकथा, पिल्सिएको जिन्दगीको जीवनकथा ।
उनीहरुले मलाई बताएका त होईनन् तर उनीहरुको हाउभाउ र व्यवहार मेरै जस्तो भएकाले मलाई अलि सन्तोष मिलेको थियो कि संसारमा म मात्र हैन मजस्ता अरु पनि हुन्छन् भनेर । म उनीहरु जस्तो धेरै चञ्चल चाहि थिएन । घरको आर्थिक सामाजिक परिवेशले होला । म बच्चादेखि नै अन्तर्मुखी थिए । यसर्थ ‘असल’ शब्दको विशेषण थपिदिएका थिए मेरो नाममाथि छिमेकीहरुले । यसको प्रभावले नै होला कुनै बदमासी गरिएन बच्चाबेलामा ।कक्षा ८ पढ्दै गर्दा पल्लो गाउँकी नीला रिजालसँग मेरो आकर्षण रहन गयो । मेरो पढाई राम्रोे भएकाले सबै विद्यार्थी अनि शिक्षक मसँग नजिकिन्थे ।
बाँचेको पनि के भन्नु मरिराछ भन्नु नै उपयुक्त होला । मैले समयमै आफुलाई आत्मप्रकाशन गर्न नसक्नुको पीडा जिन्दगीभरी भोग्ने भएँ । अब जिन्दगीमा एउटै उद्देश्यले जन्म लिएको छ–समाजसेवा गर्ने । साथीहरु खुलेर समाजसेवा गर्दै हुनुहुन्छ तर म अप्रत्यक्ष रुपले उहाँहरुलाई साथ दिईरहेको छु । सामाजिक चेतना बढ्दो छ । यसर्थ म पनि अब छिट्टै खुलेर समाजमा प्रस्तुत हुन्छु होला । पीडाको यो जिन्दगी अब धेरै बाँचिरहन सक्दिन म । सायद् यसैको परिणामले हुनसक्छ , म आज यो मेरो आफ्नै आत्मकथा सबैलाई सुनाउने जमर्कोमा जुटे । जिन्दगी यस्तै रहेछ कहिले काडाँ अनि कहिले फूल /
श्राेत – पहिचान